प्रधानमन्त्रीज्यू ! सञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस् शिक्षा . समाचार८ फागुन २०७६
हाम्रो एकवर्षे सिकाइ एक वर्षको अवधिमा हामीले लोकतन्त्र, जनाधिकार, नागरिक हक र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेनौँ, भविष्यमा पनि गर्नेछैनौँ शिक्षा . समाचार२७ माघ २०७६
सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले खुट्टा नकमाओस् जनता सडकमा उत्रिएर सरकारलाई यसमा बल प्रदान गरिरहेका छन् । यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पनि छ । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा तथा चिनियाँ र अन्य भूगोलविद्द्वारा प्रकाशित नक्साले समेत महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएका छन् शिक्षा . समाचार२४ कात्तिक २०७६
दलबाटै संरक्षित नहुन् ‘अभियुक्त नेता’ यस्ता अभियोगमा अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भइसकेका, किटानी जाहेरी परेका, जनता धम्क्याएर त्रासमा राख्नेलाई पनि दलीय आवद्धताकै आधारमा हामीले नेता मानिरहनुपरेको छ शिक्षा . समाचार४ कात्तिक २०७६
वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नियोजित हमला ज्ञानेन्द्रलाई ढाल बनाएर राज्यको तर्फबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला भइरहेको छ । जसका कारण एउटा नागरिक अनावश्यक ‘हिरो बन्ने’ तर आमनागरिक प्रताडित हुने अवस्था बढिरहेको छ शिक्षा . समाचार१२ असोज २०७६
निकासको एक मात्र विकल्प वार्ता इतिहासले भन्छ– देशमा ठूला आपराधिक घटना हुँदा गृहमन्त्रीले सार्वजनिक चासो व्यक्त गर्छन् । जनतालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन ढाडस दिन्छन् । तर, हाम्रा गृहमन्त्री, राज्य छ भन्ने अनुभूत गराउन नसक्ने अवस्थामा कसरी पुगे, विषय गम्भीर छ शिक्षा . समाचार१४ जेठ २०७६
लगानी सम्मेलन सफल लगानी सम्मेलनपछि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । २ बर्ष अगाडि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, त्यसको निकै सानो अंश मात्रै लगानी आयो । नेपालसँग त्यो नमिठो अनुभव छ । अब नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्तासँग समन्वय गरेर लगानी भित्र्याउन पहल जरुरी छ । शिक्षा . समाचार१८ चैत २०७५
सीके राउत अवतरणपछिका चुनौती नाटकीय ढंगबाट सरकारसँग राजनीतिक सहमति गर्दा सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘जनअभिमत’ बहु बिवादित बन्यो । जनकपुर विमानस्थलमा उनका कार्यकर्ताले देखाएको हर्कतले यसलाई मलजल पनि गर्यो । शिक्षा . समाचार६ चैत २०७५